ကျစ်လစ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ကျစ်လစ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ကျစ်လစ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mation.Sတွင်ce 1997, AOX ရှိပါတယ် လုပ် တိုင်း efဘို့t သို့ ပို့ အဆိုပါ အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေး AOX-R ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် န်ဆောင်မှုများ ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers.Through အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှု, နည်းပညာ တိုးတက်ရေး နှင့် လူ့ resကျွန်တော်တို့၏ces စီမံခန့်ခွဲမှု, ကျွန်တော်တို့ လိမ့်မည် ကြိုးစား သို့ ခဲ နှင့် မြှင့်တင်ရန် အဆိုပါ တိုးတက်ရေး ၏ အဆိုပါ တွင်dustry.We များမှာ မျှော်လင့် ဖြစ်လာသည် yကျွန်တော်တို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်း အပိုင်းner တွင် Chတွင်a.
1. Wide torque အကွာအဝေး: AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ torque လျှပ်စစ် actuator turn 30Nm-5000Nm ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
2. နယူးစက်မှုအနေအထားကိုညွှန်ပြချက်: AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းစုတစုသစ်တံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံဟာပြင်ပအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏လျှပ်စစ် actuator တွေ့ကြံလိုအပ်ချက်ဖွင့်နှင့်ရေကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
3. အရောင်ရွေးချယ်မှုများ၏မတူကွဲပြား: နျ Standard အရောင်ကမီးခိုးရောင်နဲ့ bule ဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းများ၏မှန်မျက်နှာပြင်လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်မယ့်ခုံးမှန်ဘီလူးချမှတ်လျက်, ရေနုတ်မြောင်းဆိပ်ကမ်းကိုရေစုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး, နှင့်စောငျ့ရှောကျဖို့ပိုအဆင်ပြေသည်, အလွယ်တကူပျက်စီးမထားပြင်ပသတ္တုပစ္စည်းများ၏လုပ်သောတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အဆို့ရှင်အဖွင့်အရိပ်အယောင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ အမိန့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစံဝယ်ယူအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်း, လုံခြုံခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း team.It တည်ထောင်ရန်အတွက်လျှပ်စစ် actuator turn ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနည်းပညာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ် patents.We ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့ AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
A: ပုံမှန် AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
Q: စျေးနှုန်းသက်တမ်း AOX ကြမည်နည်း
ဖြေကျနော်တို့ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာ FOB, CIF, EX-အလုပ်မှာပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်